Hiran State - News: Doorashada madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka oo ka dhaceysa july Mogdisho.
Doorashada madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka oo ka dhaceysa july Mogdisho.
Khamiis 16, Maarso 2011(HSOL)-Kedib dadaalo dhinaca diplomasiyada ah oo maalmahani socday ayaa ugu danbeyn leysla gartay in caasimada Somaliya ee Mogdisho lagu qabto doorashada madaxweynaha Somaliya iyo gudoomiyaha baarlamaanka.
Inta ka horeyso bisha july ayaa lagu wadaa in magaalada Mogdisho ay noqoto magaalo xasiloon oo aan wax hub ah lala dhax mari karin taas oo micnaheedu tahay iney si buuxda TFGda ula wareegto dhamaan amaanka caasimada iyo nawaaxigeeda.
Inta badan shirarka Somalida ayaa lagu qaban jiray meel ka baxsan dalka Somaliya taasi oo dhaqaalo badan ka soo gali jiray hadba wadamada shirkaasi lagu qabto laakisne hada waxey u muuqataa in dhaqaalaha Somaliya ay wax badan iska bedelayan hadii uu shirkaasi amaba doorashadaasi ay ka dhacdo meel ka mid ah gudaha Somaliya.
Dhaq dhaqaaqyo siyaasadeed ayaa durbaba ka bilaawday gudaha wadanka iyadoo ay halkaasi mudo dhawr kedibna ay ku qul quli doonaan musharaxiinta iyo wadamada daneeya arimaha Somaliya.
· admin on March 17 2011 18:12:09 · 0 Comments · 1805 Reads ·
14,637,982 unique visits